Koorsooyinka soo celinta - Geofumadas
Abuur noocyo BIM ah oo loogu talagalay rakibida tuubada Waxaad baran doonto Si wada jir ah uga shaqee mashaariicda anshax-marinta badan ee ku lug leh mashaariicda dhuumaha Qaabaynta astaamaha caadiga ah ee nidaamyada tuubada Fahmaan hawlgalka macquulka ah ee nidaamyada ku jira Revit Isticmaalka buug-gacmeedka iyo qalabka isdaba-marinta tooska ah ee tubooyinka.
Koorsooyinka - BIM MEP Koorsooyinka soo celinta
Koorsadan waxaan diiradda saari doonaa isticmaalka aaladaha Revit ee naga caawiya sameynta falanqaynta tamarta ee dhismayaasha. Waxaan arki doonaa sida loo galiyo macluumaadka tamarta qaabkeenna iyo sida loogu dhoofiyo macluumaadkan daaweynta ka baxsan Revit. Qeybta ugu dambeysa, waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonnaa abuurista nidaamyo macquul ah ...
Koorsadan AulaGEO waxay baraysaa isticmaalka Revit-ka qaabeynta, qaabeynta iyo xisaabinta nidaamyada korantada. Waxaad baran doontaa inaad ku shaqeyso iskaashi lala yeesho qeybaha kale ee la xiriira qaabeynta iyo dhismaha dhismooyinka. Inta lagu guda jiro horumarinta koorsada waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonnaa qaabeynta lagama maarmaanka u ah mashruuca Revit-ka si aan u fulino ...
Koorsadan waxaan diiradda saari doonnaa soo saarista tirada si toos ah moodooyinkayaga BIM. Waxaan ka wada hadli doonaa siyaabo kala duwan oo loo soo saaro tirada iyadoo la isticmaalayo Revit iyo Naviswork. Soo saaridda xisaabinta mitirku waa hawl muhiim ah oo ku dhexqasan heerarka kala duwan ee mashruuca waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa dhammaan cabbirka BIM. Inta lagu guda jiro koorsadan waxaad baran doontaa inaad ...
Koorsooyinka - Hawlgalka BIM Koorsooyinka NavisWorks Koorsooyinka soo celinta
Koorsada Hydrosanitary systems iyadoo la adeegsanayo Revit MEP
Baro sida loo isticmaalo REVIT MEP qaabeynta Naqshadaha Nadaafadda. Ku soo dhowow koorsadan ku-rakibidda Nadaafadda oo ay la socoto Revit MEP. Faa'iidooyinka: Waxaad ka talin doontaa ka interface in la abuuro qorshooyinka. Waxaad ku baran doontaa tan ugu caansan, mashruuc dhab ah oo 4-deganaansho ah. Waxaan kuugu hagi doonaa talaabo talaabo, uma maleyn doono inaad wax ka ogtahay Revit, ama Sanitaria ...
Xisaabinta BIM Naqshadeynta Koorsadani waa hage adeegsade ah oo hordhac u ah adduunka naqshadeynta xisaabinta iyadoo la adeegsanayo Dynamo, oo ah goob u furan barnaamij barnaamij muuqaal ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha. Socodka waxaa lagu horumariyey iyada oo loo marayo mashaariicda fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijyada muuqaalka lagu baran doono. Mawduucyada waxaan ka qaban doonnaa shaqada joomatari ...
Koorsooyinka - Hawlgalka BIM Koorsooyinka Barnaamijka Koorsooyinka soo celinta
Koorsada 'Revit MEP Course' (makaanik, koronto iyo tuubooyin)
Ku sawir, naqshadee oo ku diiwaangeli nidaamyadaada mashaariicda Revit MEP. Gali qaybta naqshadeynta iyadoo la adeegsanayo BIM (Qaabeynta Macluumaadka Dhismaha) Macallimiinta qalabka wax lagu sawiro ee xoogga leh Isku habee dhuumahaaga si otomaatig ah u xisaabi dhexroor Nidaamyada qaboojiyaha farsamaysan Samee oo diiwaangeli shabakadahaaga korantada Abuur warbixinno waxtar leh oo xirfadle ah Soo bandhig ...
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Revit-ka si aad ugu abuurto mashruucyo dhismayaal Koorsadan waxaan diiradda saari doonnaa inaan ku siino adiga hababka ugu fiican ee shaqada si aad u hanan karto qalabka loo yaqaan 'Revit tools' ee loogu talagalay dhisidda moodooyinka heer xirfadeed iyo waqti aad u gaaban. Waxaan u adeegsan doonnaa luuqad fudud oo si fudud loo fahmi karo ...
Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D Koorsooyinka - Hawlgalka BIM Koorsooyinka soo celinta
Kooraska 'Autodesk Revit' - waa fududahay
Sida ugu fudud ee daawashada khabiir u horumariyo guri - lagu sharaxay talaabo talaabo Baro AutoDesk Revit sida ugu fudud. Koorsadan, waxaad ku baran doontaa fikradaha Revit-ka tallaabo tallaabo ah markaad u horumarinayso guri; Faasas wax ku ool ah oo ku saabsan qorshaha iyo kor u qaadista, Aasaaska, darbiyada iyo dhagaxa mezzanine, Albaabada iyo daaqadaha, Saqafka, Qiyaasta, Faahfaahin ...
Koorsooyinka mashaariicda dhismaha (Dib -u -habeynta Dib -u -habeynta + Robot + Shubka la xoojiyay iyo Birta Sare)
Baro sida loo isticmaalo Revit, Falanqaynta Qaabdhismeedka Robot, iyo Advance Steel qaabeynta qaabdhismeedka dhismooyinka. Ku sawir, naqshadee oo diiwaangeli mashaariicdaada qaab dhismeedka leh REVIT Ku qor aagga naqshadeynta iyada oo la adeegsanayo BIM (Dhismaha Macluumaadka Dhismaha) Macallimiinta aaladaha wax lagu sawiro ee xoogga leh Abuur tusaalooyin kuu gaar ah U dhoofi barnaamijyada xisaabinta Abuur oo qor.